31 အဘို့ရလဒ် iron man
နဂါး၏ ironman မာစတာ
မြေကြီးတပြင်အခြားဂြိုဟ်မှဂြိုဟ်သားများကကျူးကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ သေစားသေစေသောသူတို့၏ကျူးကျော်ဆန့်ကျင် Ironman ချင်တယ်။ သူ့ကိုသလူအပေါင်းတို့သည်ဂြိုလ်သားကိုဖကျြဆီးအပေါင်းတို့နှင့်တကွအဆင့်ဆင့်သွားသူ၏လက်နက်ကိုအသုံးပြုဖို့ကူညီကွပါစို့။
ironman mars စူးစမ်း
Ironman အသစ်စွမ်းအင်ရင်းမြစ်ရှာတွေ့မှအင်္ဂါဂြိုဟ်မှ Avengers မှမစ်ရှင်လက်ခံရရှိသည်။ များစွာသောဂြိုလ်သားများနှင့်မိကျောင်းရှိပါတယ်, သငျသညျသူ့ကိုမြေကြီးသို့ငြိမ်ဝပ်စွာပြန်လာ task ကိုဖြည့်စွက်ကူညီပေးပါတယ်။
သံလူကို new york ဧရာ
နယူးယောက်မြို့ကိုဂြိုလ်သားများကတိုက်ခိုက်ခဲ့တစ်နေ့မှာ, Iron Man ဘေးအန္တရာယ်ကနေမြို့ကယ်ဖို့သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရပါမည်။ သင်တို့သည်မိုဃ်းကောင်းကင်၌ Iron Man ရိုက်ကူးတ္ထုရွှေ့ဖို့ mouse ကိုသုံးလော့။
Iron Man သင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာအားလုံးပစ်မှတ်ပစ်ကိုကူညီပါ။ အားလုံးရမှတ်နှင့်ဤဂိမ်း၏အဆင့်ဆင့်ကိုရယူပါ။
တိုနီ Stark ကိုသင့်ရဲတိုက်နှင့်ဂြိုလ်သားတိုက်ခိုက်မှုကနေနယူးယောက်၏တစ်ခုလုံးကိုမြို့ကာကွယ်ရပါမည်။ Iron Man ၏လက်နက်စုံကိုဝတ်ဆင်နှင့်၎င်းတို့၏လက်နက်များနှင့်အတူတဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းဖျက်သိမ်းရေး, ဤသတ္တဝါများနောက်ကွယ်မှပျံသန်း
မြေကြီးတပြင်ရန်သူကိုကျူးကျော်ဆန့်ကျင်မှောင်မိုက်တပ်ဖွဲ့များ, Ironman နှင့် The Avengers များကခြိမ်းခြောက်နေသည်။ သငျသညျဒုံးကျည်ပစ်ခတ်ဖို့လေဆာသော့များ, N ကိုခလုတ်ရိုက်ကူးဖို့, B, တိုက်ခိုက်ဖို့ရန် Ironman, spacebar ကိုထိန်းချုပ်ဖို့မြှား keys ကိုသုံးလော့။
စွမ်းအင်ကိုအမြောက်များထုတ်, ပျံသန်းစွမ်းအင်သံ man.Lack များ၏စွမ်းအင်သံသည်လူကိုအားနည်းစေပါလိမ့်မည်လောင်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့သံသည်လူကိုဖကျြဆီးသံမဏိသေတ္တာသို့မဟုတ်ထိတွေ့စွမ်းအင်ကိုကျားကန်နေဖြင့်စွမ်းအင်ကိုပြန်လည်နိုင်ပါတယ်။ ဒင်္ဂါးပြားကိုစုဆောင်း, ကသံသည်လူ SK အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်
သံသည်လူ 3: စက်တွေ၏အဓိကရုဏ်း
စစ်ပွဲစက်များ၏ဗိုလ်ခြေအနိုင်ယူ! parkour ဒြပ်စင်နှင့်အတူတစ်ဦးကအရည်အသွေးမြင့်မား Iron Man platform ။
သင်ဤစိန်ခေါ်မှု၌သင်တို့၏မစ်ရှင်ဖြည့်စွက်ချင်တယ်ဆိုရင် Wonder Woman, Flash နှင့်အခြားသူများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ Batman, Iron Man, Spiderman နှင့်အခြားသူများအဖြစ်ရရှိနိုင်ရွေးချယ်စရာကနေသင်အကြိုက်ဆုံးစူပါဟီးရိုးကိုရွေးချယ်ပါ။
Avengers skrull ဖယ်ရှားခြင်း
သေစားသေစေသောအ Skrull Homeworld မှရန်ပွဲယူစုဝေး။ သူတို့ Skrulls နှင့်၎င်းတို့၏ဘုရင်မကြီးအနိုင်ယူနိုင်သလား? အဆိုပါ Avengers ကာတွန်းစီးရီးထဲကနေဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ retro pixel စတိုင်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူဤပျော်စရာပစ်ခတ်မှုဂိမ်း Play ။
Iron Man အ Avengers အသင်းအတွက်တစ်ဦးကိုအထူးဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါသည်, Asgardian Loki.Iron က Man ၏ဗိုလ်ခြေအားဖြင့်ကျူးကျော်ခံရအန္တရာယ်အတွက်ကမ္ဘာမြေအ space.You မှသည်မြေကာကွယ်ပေးဖို့တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်သည်ဤအချိန်အဆန့်ကျင် Iron Man ကိုထိန်းချုပ်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးနိုင်သည် ရန်သူ။
, လေအားဖြင့်ပျံသန်းမကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေ၏အားလုံးပစ်ချ, တန်ခိုး ups စုဆောင်းပါ။
တိုနီကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးဗီလိန်စက်ရုပ်အဘိဓါန် Mandarin ၏ဗိုလ်ခြေအနေမြို့ကယ်ဖို့သူ့အသံကလူကိုဝတ်စုံကို Don ရပါမည်။ ထို့နောက်သူအဘိဓါန် Mandarin မှရန်ပွဲယူနိုငျသညျ!
Iron Man အဖြစ်ဖွင့်ကိုက်ညီနှင့်သံချပ်ကာဘုန်းအသရေဖို့သင့်ရဲ့သွားရာလမ်းဗုံး! သငျသညျအပေါငျးတို့သပစ်မှတ်ထိမှန်နိုင်ပါသလား? ကွာပေါက်ကွဲမှုနှင့်ထွက်ရှာ!
Avengers Hawkeye နှင့် Black ကမုဆိုးမတစ်ဦးကိုလျှို့ဝှက် HYDRA အခြေစိုက်စခန်းများ၌နှင့်ကဆငျးသကျယူရမယ်!
ဆိုးယုတ်သောမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ Fight နှင့်ဤအသစ် Iron Man ဂိမ်းအတွက်တရားမျှတမှုကိုအစေခံရန်အဘိဓါန် Mandarin အနိုင်ယူ!
ဒီအေးမြသံသည်လူပုံရိပ်ထဲမှာ hidden နံပါတ်များအားလုံးကိုရှာ
အမျက်တော် ထွက်. , ငှက်ကိုပစ်ခတ်ဂိမ်း
သင်တစ်ဦးသေနတ်ကောက်သူတို့နှင့်ရိုက်ကူးမှစတင်ကြောင်းငှက်နှင့်ဝက်အကြားစစ်ပွဲအားဖြင့်ဒါမကျေမနပ်ခံစားရသည်။ ဒီဂိမ်းကိုသင်ကစားရန်အဘို့အနှစ်ဦးသည် Modes ရှိပါတယ်။ သငျသညျအစာရှောငျအဖြစ်သင်တတ်နိုင်သလောက်သူတို့ကိုပစ်သတ်လို mode ကိုရှေးခယျြပါ!
Controllingaship is notasimple mission, you must have the command. Become the top commander of this ship, completes its mission in the great ocean.
Kai, Zane, ဂျေးနှင့်မာစတာဟုတ်သားပဲဝူညရွာကာကွယ်ပေးရန်မိကျောင်းဆန့်ကျင်တာဝန်ယူခဲ့သည်။ Ninjago အထူးတိုက်ခိုက်ရေးဖို့, ရွှေ့ဖို့တိုက်ခိုက်မှတစ်ဦးမြှား key ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် S ကိုအားလုံးမိကျောင်းကိုဖကျြဆီးကိုကူညီပါ, C ကိုနောက်ထပ် Ninjago ပြောင်းလဲပစ်ရန်။
သင်၏နောက်မစ်ရှင်ယခုစတင်သည်။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အဆင့်ကိုပြီးမြောက်ရန်ကျွန်းအပေါင်းတို့၌ဖုတ်ကောင်သတ်ပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုးယုတ်ခေတ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပညာရှိရှိသင့်ရဲ့လက်နက်တွေသုံးပါ။ သင်၏ကျန်းမာရေးဘား Watch ။ လာဘျအကောင်းဆုံး!